विद्यालयका खाली जमिनमा तरकारीखेती गर्ने कि ! « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७४, शनिबार
काठमाडौं, मंसिर १६ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार हाइस्कूल हाताभित्र सिटी लाइब्रेरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ
मेयर फोरमको निर्णयः अनुकूल समयमा खोलिने
ललितपुर, मंसिर १६ । ललितपुर महानगरपालिकाले काठमाडौँ भ्याली मेयर फोरमको निर्णयपछि अनुकूल समयमा मात्र विद्यालय
बैतडी, मंसिर १५ । लामो समयदेखि तलब नपाएपछि आन्दोलित भएका बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर: कोभिड–१९ महामारीपछि सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा ६४ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकाको सिकाइ
धादिङ, १४ मङ्सिर: राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन अध्यापनमा जोड